सागमा पत्रकारलाई प्रहरीबाट गेटमै अवरोध, भन्छन्- माथिको आदेश छ भित्र छिर्न दिँदैनौं !
काठमाडौं-१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) को मंसिर १५ गते भव्य समारोहबीच उद्घाटन भयो । उद्घाटन समारोह हेर्नेहरूले प्रस्तुति र रंगशालाको परिवर्तनलाई लिएर 'आहा' भने । उद्घाटन समारोह भव्य भयो तर गञ्जागोल भने छरप्रस्ट भयो ।
गञ्जागोल हो- पत्रकारहरूलाई खेलको रिपोर्टिङ गर्न बाधा पुर्‍याउनु । यसैबीच मंगलवार त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा नेपाल र भुटानबीच पुरुष फूटबल भयो । जसमा नेपालले भुटानलाई ४-० मा पाखा लगायो । यतिबेलासम्म माहोल ठीकै थियो । माहोल पूरै बिग्रियो, महिला भलिबलको खेलमा ।
अपरान्ह ४ बजे महिला भलिबलको फाइनल नेपाल र भारतबीच राखेप कभर्ड हलमा हुँदै थियो । खेल पत्रकारहरू फूटबल र अन्य खेलको रिपोर्टिङ गरेर फर्केका थिए । पत्रकारको हुल महिला भलिबलको रिपोर्टिङ गर्न भित्र पस्न खोज्यो । गेटमा रहेका प्रहरीहरूले रोक्दै भने, 'तपाईंहरूको जस्तो कार्ड त हामीसँग पनि छ । माथिको आदेश छ भित्र जान दिँदैनौं ।'
हुलमुल भएका कारण कुनै प्रहरी अधिकारीको नाम र पदबारे लेख्न सकिएन ।
पत्रकारहरूले रिपोर्टिङ गर्नका लागि कभर्ड हल प्रवेशका लागि 'हामी पत्रकार हौं । हामीलाई अफिसले यहाँ खटाएको छ । अब के समाचार लेख्नु ?'
कभर्ड हलमा 'मिडिया सेन्टर' छ । त्यहाँबाट कभर्ड हलभित्र जाने बाटो छ । फोटो तथा भिडियो लेखिएका हरियो ज्याकेट लगाएका केही पत्रकार र घाँटीमा ओलम्पिक कमिटीद्वारा जारी गरिएको प्रेस पास झुण्ड्याएर हल पस्न खोजे । त्यहाँ पनि प्रहरीबाटै अवरोध भयो । उत्तर एउटै आयो- आदेश मान्नैपर्‍यो । जे गरे पनि भित्र जान दिँदैनौं ।
त्यसपछि पल्लो गेटबाट छिर्न खोज्यौं । त्यहाँ त चुकुल लगाएर बसेको थियो प्रहरीको टोली ।
गेटमा बसेका एक अधिकारी थरका प्रहरी अधिकृतले सिपाहीहरूलाई ठाडै आदेश दिएर हिँडै- मेरो आदेश नआएसम्म ढोका नखोल्नु । कसैलाई पनि छिराउनै होइन ।
त्यसपछि पत्रकारहरूले सँगै राखिएको ई-सेवा काउन्टरका कर्मचारीलाई भने- तपाईंहरूले क्षमताभन्दा बढी मान्छे छिराउनुभयो । त्यसलगत्तै ई-सेवाका ती कर्मचारी भित्र छिरे । पछि उनी पनि देखिएनन् ।
पत्रकार र प्रहरीबीचको एक घण्टा लामो गलफतीपछि फोटो पत्रकारले त्यहीँ विरोध गरे हातमा बोकेको क्यामेरा उठाएर ।
क्यामेरा उठाएपछि गेटमा बसेका प्रहरीले फेरि भने- क्यामेराले केही हुन्न ।
खेल पत्रकार निराश हुँदै केही फर्के । अनि भने- अब भलिबलको समाचार लेख्न पाइएन, बाहिरको वातावरणलाई समाचार बनाउनुपर्ने भयो । यसलाई नै फिचराइज गरौं ।
धेरैले प्रहरी र पत्रकारबीचको हल छिर्ने 'लडाईं'लाई क्यामेरामा कैद गरेका छन् । भिडियो सार्वजनिक भएपछि छर्लङ्गै देख्न सकिन्छ प्रहरीको व्यवहार ।
यसैबीच 'म भलिबल एड्मिन अफिर' हुँ भन्दै एक जना गेटमा आइपुगे । भिडभाड भएकाले कार्डमा लेखिएको नाम हेर्न भ्याइएन । सँगै एनटीभीका पत्रकारले प्रहरीलाई अनुरोध गर्दै भने, 'बरू हामी पत्रकारलाई नछिराउनु । उहाँ भित्रको मान्छे हो । उहाँलाई जसरी पनि छिर्न दिनु ।' तर त्यो अनुरोध काम लागेन । उल्टै प्रहरीले जवाफ दियो, 'भित्र खाँचै पर्‍यो भने तपाईंलाई यहिँ लिन आउँछन् । आदेशबिना छिर्न दिँदैनौं । भारतीय खेलाडीलाई त छिर्न दिएनौं । पाहुनालाई त दिएनौं ।' माथिको आदेश भन्ने शब्दमा प्रहरीको दम्भ छर्लङ्गै देखिन्थ्यो ।
पत्रकारहरूले राखेपका मान्छे बोलाउनु कि छिर्न दिनु भन्दै चर्को स्वरले कुरा गरे । प्रहरीले फोटोग्राफरलाई जान दिने भयो । त्यो पनि पाँच जना । 'फोटोग्राफरले न्यूज लेख्दैनन् । समाचार कसले लेख्छ ? काम फरक हो । दिने भयो सबैलाई जान दिनु नत्र हुन्न,' भन्यौं ।
पाँच मिनेटपछि भित्र जान दिए । पहिलो गेटबाट भित्र छिर्दा युद्ध जितेभन्दा कम भएको थिएन मलाई चाहिँ । सायद अरूले पनि त्यही महसूस गरे होलान् । भित्र त पस्यौं तर खेल हेर्ने स्थानमा फेरि हामीलाई अवरोध भयो । हलमा हुटिङ चलिरहेको छ तर खेल पत्रकारले त्यो माहोल नियाल्न पाएनन् । त्यहाँ पनि प्रहरीले अवरोध खडा गरिनै रह्यो ।
'बाहिरबाट भित्र छिर्न दिइसके । तपाईंहरूले किन रोक्नुभएको ? छिर्न आदेश दिइसक्यौं भनेर भन्नुभा'छ,' मैले भनेँ । उत्तर दोहोरिरह्यो- छिराउने आदेश छैन।
समाचार संकलन गर्न पत्रकारलाई बाधा पुर्‍याउने भए किन यो कार्ड दिएको भन्दै केही जंगिए पनि तर सुनुवाई भएन ।
सनराइज खबरका रिपोर्टर टेकेन्द्र बुढाथोकीले प्रहरीलाई पीडा सुनाउँदै थिए, 'हामी समाचार के लेख्ने ? कसरी लेख्ने ?'
प्रहरीले जवाफ फर्कायो- बस्ने ठाउँ छैन । कसरी छिराउनु ?
एकै स्वरमा पत्रकारहरूले भने- बस्ने ठाउँ छैन भने हामी उठेर पनि समाचार लेख्छौं । तर छिराउनुपर्‍यो ।
भलिबल संघकी एक पदाधिकारी पनि आइन् । प्रहरीले कुरा अझै सुनेन ।
तर अन्तिममा एक जनाले गेटबाट भने, 'असई सा'प तपाईं यहाँ आउनु त । 'म माथि सचिवालयबाट आएको पत्रकारलाई छिर्न दिनु ।' अनि मात्र हामी भित्र छिर्न पायौं ।
हाम्रो र प्रहरीबीचको गलफती कति लामो भएको थियो कि भित्र छिर्दा एक सेटको खेल सकिसकेको थियो ।
तर भित् छिरेपछि बाहिरको अवरोध, प्रहरीको व्यवहार पूरै बिर्साउने खेल प्रदर्शन र दर्शकको उपस्थिति थियो ।
भारतलाई पराजित गरेको समाचार लेख्न नपाइए पनि नेपाली महिला भलिबल खेलाडीहरूको प्रदर्शनले मन भने जित्यो ।